Displaying 57 to 60 of 110 items.
More Media Arrests in Zimbabwe
World Press Review Zimbabwe correspondent Julius Dawu reports on the arrest of four independent journalists in the first weeks of the new year.
Sarah Coleman reports on Zimbabwean and African press response to Zimbabwe's parting of ways with the Commonwealth and the country's increasingly rocky relationship with other African countries.
Zimbabwe’s Censors Win a Round
World Press Review Zimbabwe correspondent Julius Dawu reports on the latest developments in the legal battle over the fate of Zimbabwe's Daily News.
The Daily News: Gone but Not Forgotten
The closure of Zimbabwe's independent daily newspaper the Daily News on Sept. 12 was another blow to press freedom in Zimbabwe. Julius Dawu surveys Zimbabwean press reaction to the closure.